Portable CoolUtils_PDF_Combine_2.1.95. (5 MB) ~ မောင်သက်ဝေ
Portable CoolUtils_PDF_Combine_2.1.95. (5 MB)
Monday, December 12, 2011 Admin No comments
ဗားရှင်းအသစ်ပါ PDF ဖိုင်တွေ ကွဲနေရင်အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်တဲ့ pdf combine portableလေးပါ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ပေါင်းစပ်ချင်တဲ့ စာအုပ်ဖိုင်လေးတွေကို check မှတ်ပြီး menu မှာရှိတဲ့ convert/combine to pdf ကိုသွားလိုက်ပါ သိမ်းမယ့်နေရာမှာနာမည်ပေးနိုင်ပါတယ်...key တောင်းခဲ့ရင် ထည့်ပေးလိုက်ပါ. အထဲမှာ ပါပါတယ်။ အသုံးပြုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ download ယူလိုက်ပါ။